'Indoda kufuneka ukunyaniseka nobulungisa, kanye njengoko inqwelo okanye inqwelo kufuneka amavili.'
- ngu Confucius
Shanghai Feipeng Automotive Technology Co., Ltd ligxininisa kuyilo ivili zomgunyathi kunye nokuveliswa. Feipeng omela ezisemgangathweni nokuhlonipheka ukuze ndinimise phambi uhlobo Chinese ethnical: Niyue. Feipeng kwakhona inika inkonzo wena uyilo ivili kunye nenkonzo OEM.
Njengelungu le CAW (China Aluminium Wheel Umgangatho Association), Feipeng lulandelayo ngokungqongqo nemigangatho yobulunga. Le engineering kunye nomgangatho iqela Feipeng uneminyaka engaphezu kwama-40 amava kushishino kwaso kweevili ezijikelezayo, yaye usoloko lenza ukuba ukunika ukusebenza eliphezulu kunye noyilo ephambili ivili zomgunyathi kuwe. Iqela lethu professional kunye nezixhobo entle ukuqinisekisa uhambo lwakho ekhuselekileyo.
amavili Niyue zomgunyathi oqhuba nangobungcibi zemveli Chinese kukwenza Made in China abanekratshi kwakhona!
Izinto eziluncedo ze NIYUE
Brand Independent , uyilo elilodwa lomenzi wechiza, series weendawo , akukho yabanye, akukho zobunjineli umva. Design yethu strong graphic rahman uhlalutyo namandla avumela wena uyilo kwiintsuku ezi-3
iRacing umatshini shop ezizodwa mveliso ubungakanani ngcathu namavili elungelelanisiweyo. ixesha Lead iintsuku ezingama-30
Ngokungqongqo kulandela inkqubo imbonakalo kunye nolawulo lomgangatho. Ezinye zezi nqobo ngaphezulu US ne mveliso Japanese ezifana, baleka-off kunye nodaba imali eseleyo.
Detialed nkqubo iwaranti umgangatho ukukhusela amalungelo abathengi. Zonke iimveliso Feipeng babe warranty umgangatho ebomini yaye iinyanga ezili-18 enamathela kweziqinisekiso.